Ufunda Njani Uvavanyo?
Ufunda njani uvavanyo xa unemihla ezintlanu? Ewe, lo ngumbuzo omkhulu! Ngombulelo, awuyikubuza, "Ufundela njani uvavanyo" ukuba unayo enye , ezimbini , ezintathu okanye ezine iintsuku. Uzinike ixesha elaneleyo lokulungiselela ngokupheleleyo ukuvavanya kwakho, kwaye akazange akhankanywe ngokucima. Nantsi isimiso sakho seentsuku ezi-5.
Isifundo soSuku loVavanyo 1: Cela kwaye ufunde
Buza uthisha wakho ukuba luhlobo luni lovavanyo oluya kubakho. Ukhetho oluninzi? Umxholo? Oko kuya kwenza umehluko kwindlela olungiselela ngayo.
Buza uthisha wakho iphepha elihlaziyiweyo ukuba yena akakunikanga omnye. (okt umxholo wokuvavanya)
Fumana isifundo somlingani esilungiselele ubusuku phambi kokuvavanya ukuba kunokwenzeka - nangona ngefowuni / facebook / Skype.
Thatha ikhaya lakho iphepha lokuhlaziya kunye nencwadi.
Yidla ukutya kwengqondo .
Funda iphepha lakho lokuhlaziya, ngoko uyazi oko kuza kuhlolwa.
Phinda ufunde izahluko kwincwadi yokufunda eya kuhlolwa.
Nguye loo mini!
UFundo lweSuku loVavanyo lwe-2: Hlela uze wenze ii-Flashcards
Naka ingqalelo kwiklasi - utitshala wakho unokuya kwizinto eziza kuhlolwa!
Thatha ekhaya izibonelelo zakho, izabelo, kunye nemibuzo yangaphambili kunye nephepha lakho lokufunda kunye nephepha lokuphonononga.
Hlela amanqaku akho. Phinda ubhale kwakhona okanye uthayiphe phezulu ukuze bafumaneke. Hlanganisa ukunikezelwa kwakho ngokwemihla. Qaphela into enayo. (Kuphi i-vocab quiz kwi sahluko 2?)
Hamba ngephepha lakho lokuphonononga, ufumane iimpendulo kuyo yonke imibuzo ekhoyo ukusuka kumanqaku akho, izibonelelo, incwadi yeencwadi, njl.
Yenza ii-flashcards ngombuzo / ngegama / igama legama le-vocab ngaphambili kwekhadi, kunye nempendulo emva. Xa usugqibile, faka ii-flashcards zakho kwi-backpack yakho ukuze ufunde yonke imihla ngomso.
Hlala ugxile !
Isifundo soSuku loVavanyo 3: Khumbula
Kuyo yonke imini, shenxisa ii-flashcards uze uzibuze imibuzo (xa ulindele iklasi ukuqala, ngesidlo sasemini, ngexesha le-holide yokufunda, njl.)
Cacisa nayiphi na into ongazange uyiqonde ngokupheleleyo ngutitshala wakho. Cela izinto ezingekhoyo (loo vocab quiz isahluko 2).
Buza ukuba kuya kuba nohlolo phambi kokuvavanya kamva kweliveki.
Beka i-timer imizuzu engama-45, kwaye uyikhumbule yonke into kwishidi lokuphonononga ongayakwaziyo ukusebenzisa amacebo omnemon njengama-acronyms okanye ukucula ingoma. Yeka emva kwemizuzu engama-45 uze uqhubele kwenye imisebenzi yasekhaya. Unemihla emibini yokufunda le nkwenkwe embi!
Beka ii-flashcards zakho kwi-backpack yakho ukuze uphonononge ngakumbi ngomso.
Isifundo soSuku loVavanyo lwe-4: Khumbula ezinye izinto
Kwakhona, susa ii-flashcards zakho uze uzibuze imibuzo ngemihla.
Qinisekisa umhla wokufunda ngomso ebusuku.
Beka i-timer imizuzu engama-45 kwakhona. Buyela kwi-flashcards yakho kwaye ubuyekeze iphepha, ukhumbuze nantoni na ongayichitha phantsi. Thatha umzuzu o-5. Ukuba kuyimfuneko, setha i-timer imizuzu engama-45 kwakhona uze uqhubeke ukuba awuqinisekanga nayiphi na into!
Beka ii-flashcards zakho kwi-backpack yakho ukuhlaziywa kwakhona ngomso.
UFundo lweSuku loVavanyo lwe-5: UFundo kunye nee-Quiz
Kuyo yonke imini, susa ii-flashcards zakho kwaye uzibuze imibuzo kwakhona.
Ukuba utitshala wakho uhlalutyo lokuhlalutya namhlanje, khawuleza ubhale kwaye ubhale nantoni na ongayifunanga. Ukuba utitshala uthetha namhlanje - kuvavanyo, kuqinisekisiwe!
Qinisekisa umhla wokufunda kunye nomhlobo ngokuhlwa.
Ilishumi-engamashumi amabini ngaphambi kokuba ufunde iqabane lakho (okanye umama) libonisa ukubuza imibuzo malunga noviwo, hlola ii-flashcards zakho. Qinisekisa ukuba unayo yonke into phantsi.
Quiz. Xa ufunda iqabane lakho lokufunda, phendukana nokubuza imibuzo enokuyenza. Qinisekisa ukuba ngamnye wenu unokuphendulela ukuphendula nokuphendula ngenxa yokuba uya kufunda izinto ezilungileyo ngokuzenza zombini. Yeka xa sele uhamba ngemibuzo ngamaxesha ambalwa uze ulale ubusuku obuhle.
Ukuqonda ukuFunda kweBakala kweThathu
Indlela yokufumana iMbono ephambili
Indlela yokwenza isiGama seKlasi iiCards
Iifayile zeDio ezigqwesileyo
I-Qué hacer iyakunqumla i-J-1 i-antes de tiempo
'Iimpawu eziMnandi neziMali'
Yiyiphi i-Domino Theory?
Ikhalenda lesiFrentshi: Ukuthetha ngeeNtsuku, iiVeki, iNyanga kunye neeNkxaso
Iingcebiso ezibalulekileyo zokuFunda Indlela yokuhamba
Ukuqonda nokusebenzisa iLoops
Amaxabiso ayenziwa: i-Shirley Temple Dolls
Ukubhenca Umndeni Wakho Imbali Yomlando
'80s Ukubuyiswa Kwangaphambili Nombolo 1 Iingoma Zeengoma eziye zabe ziPhupha eziphezulu
Iinyanga Zethu Ezizine: Ubusika, iSpempe, ihlobo, iAkwindla
Yintoni i-GT Imele kwi-Mustang GT?
Imfazwe yaseMelika: jikelele uJoseph E. Johnston
Ngaba kulungile ukusebenzisa i-CE ne-BCE okanye i-AD ne-BC?